Wheels | October 2021
Isi > Wheels
n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe
Okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe - ihe ngwọta ga-ekwe omume
You chọrọ wiil pụrụ iche maka diski brek? Iji jiri diski breeki, ị ga-achọ ebe wiil dị iche iche karịa na brake breeki ọkọlọtọ, na ndụdụ ahụ ga-achọ taabụ ugwu breeki iji nweta diski brek.
bụ aero wiil kwesịrị ya
Ndi akuku ugbo elu kwesiri ya - iza ajuju
Wheelsgbọ elu ikuku ọ dị mma ịrịgo? Na ngwụcha, mgbe ibu na-ada ikuku mgbe ị na-arịgo, ma ọ bụrụ na ị na-agba n'ụzọ ndị dị larịị, na-agagharị n'okirikiri ma ọ bụ ọbụna usoro ugwu nke nwere ụzọ ndagwurugwu dị ogologo, ikuku nwere ike ịdị mkpa karịa njem ahụ. 30 2017.
olee otu esi eme taya taya igwe
Olee otu esi eji taya igwe agba agba - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe taya na-arụ igwe Ihe owuwu. Taya ịnyịnya ígwè nwere ihe eji akwacha akwa a na-etinye na roba, nke a na-akpọkwa ozu, tinyere roba ọzọ, nke a na-akpọ nzọ ụkwụ, n'elu nke na-akpọtụrụ okporo ụzọ. N’ihe banyere ndị na-ahụ maka ahụ ike, akpati ahụ na-ekpuchita ihe bekee abụọ, otu na nsọtụ nke ọ bụla.
ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ
Igwe igwe kwụ otu ebe kachasị ọnụ - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe bụ igwe taya igwe kachasị ọnụ? A na-ekwu na ụkwụ Gokiso sitere na Kondo Machine bụ wiil igwe kwụ otu ebe kachasị mma n'ụwa ma jiri akara ọnụahịa dabara arụmọrụ pụrụ iche nke setịpụrụ. Di na nwunye ọ bụla na-efu $ 7,900.
ffwd track wiil
Ffwd track wiil - esi nweta
Ndi FFWD wiil di nma? Na mkpokọta, wiil FFWD RYOT44 dị ezigbo mma. Ee, ị nwere ike ịzụta ọnụ ala, mana ogo ebe a bụ ọfụma kachasị elu ma gosipụta ya mgbe ị na-agba n'okporo ụzọ: ọtụtụ arụmọrụ na ọkwa nkasi obi dị mma.
Ridley wiil - ihe kachasị ndu
Ridley anyịnya igwe ọ bụla dị mma? Ridley anyịnya igwe dị mma. Naanị m zụrụ otu ma na-anụ ụtọ ya. Lọ ahịa ndị na-ekpofu ụdị ndị ọzọ bụ naanị ndị ajọ mmadụ. N'ime afọ ole na ole mgbe ha gbanwere ụdị, ha ga-atụgharị igwe kwụ otu ebe ha na-ere taa.
ihe bụ tubeless igwe kwụ otu ebe
Gịnị bụ taya na-enweghị tube - ka esi edozi ya
Kedu uru nke taya taya na-enweghị tube? Tubeless pros Taya nwere ike na-agba ịnyịnya na nrụgide dị ala, na-emeziwanye traction na-enweghị ụzọ, na-enweghị ihe egwu nke pinch-punctures. Nrụgide dị ala pụtara nkasi obi ka mma na ịrụ ọrụ arụmọrụ na ebupụta ihu igwe (lee cyclinguk.org/cycle/tyre-pressure). Iguzogide imeghari kwesiri idi ala obula n’elu ebe di nma.28.01.2020
pụrụ iche taya tubeless
Pụrụ iche tubeless taya - ihe na-eme ihe ngwọta
Ndi ọkpọka taya pụrụ iche? Emeghị Ka Ọ Dị Ihe Ọzọ, togba ịnyịnya Dị Ka Ọ Bụghị Ọzọ. Taya metụtara na Ọpụrụiche. Ebumnuche anyị abụghị ka anyị mepụta taya, ma ọ bụ ihe na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ỌT COMT COM ihe na-enye obi ụtọ, ijikwa aka na ịma mma.
carbon na-ekwu okwu wiil
Carbon kwuru wiil - ihe ngwọta
Ndi carbon dị mma? Ndị na-ekwuchitere carbon na-enye ma nkwesi ike dị elu na ndụ ike ọgwụgwụ ka mma ma e jiri ya tụnyere nchara ọdịnala ọdịnala, n'agbanyeghị obere ibu. The carbon eriri bụ unidirectional layup, na-enye kwuru okwu a ịgba ịgba nke 300kgf. Nke ahụ karịrị akarị 125kgf nke a na-ewukwasị rim carbon.
paris roubaix taya
Paris roubaix taya - depụtara ajụjụ na azịza
Kedu taya eji na Paris-Roubaix? Ọ bụ ezie na na Flanders ọtụtụ ndị na-anya ụgbọ na-ahọrọ 25mm nke taya zuru oke, cobbles nke Paris-Roubaix siri ike nke ukwuu karịa na anyị ga-ahụ taya 27 ruo 30mm nke ọtụtụ ndị otu na-eji. Taya a dịgasị iche iche adabaghị na igwe kwụ otu ebe mgbe niile, agbanyeghị nke ahụ na-amalite ịgbanwe dịka ọgbọ ọhụrụ nke ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ga-ewe taya 28mm.
dt swiss track wiilị
Dt swiss track wiil - pragmatị ihe ngwọta
Bụ DT Switzerland Ezi ụkwụ? Ọ na-agụ na akụkụ, 'N'afọ ndị na-adịbeghị anya, DT Switzerland agbanweela onwe ya site na ngwongwo akụrụngwa a na-akwanyere ùgwù, nke nwere aha ọma maka ịdị mfe, nkenke, na nkwụsi ike, n'ime akara kachasị maka usoro teknụzụ dị egwu na nke ọma. '22 . 2018.
Tcs taya - otu esi edozi ya
Kedu ihe TCS pụtara na igwe kwụ otu ebe? TCS (Sistemụ Na-arụkọ Ọrụ Na-enweghị Mkpakọrịta) bụ sistemụ na-enweghị eriri tube / taya na-ezubere iji kwado ụkpụrụ ụwa ETRTO ma hụ na a pụrụ ịdabere na ya.
Prime carbon wiil - olee otu ị ga-esi edozi
Wheelsgbọ ala carbon dị mma ọ bụla? Ha emeela ụfọdụ ọsọ ọsọ na njem ịnyịnya na ala na-agwakọta na echiche m na-adịgide adịgide bụ na ndị a dị oke ọsọ ọsọ ma dịkwa ezigbo mma. The braking bụ otu n'ime isi ihe ndị a wiil. Mgbe ejiri ya na mpempe akwụkwọ enyere, ike dị ezigbo mma yana ọ na-agbanwe agbanwe.
Odo odo - ihe ngwọta na
Ngwurugwu Cero ọ dị mma? Ejisiri m ike dọrọ gburugburu 2000km + na wiil ndị a, nke karịrị oge zuru ezu iji duru m ruo na nkwubi okwu na nke a bụ igwe na-atụgharị anya nke ọma. Igwe ndị a nwere ike ịgbagha n'okporo ụzọ, gravel na ala ọ bụla dị n'etiti. 1. 2020.
gravel taya maka igwe kwụ n’okporo ụzọ
Ajịrịja anụ taya maka ụzọ okporo ụzọ - ihe ngwọta maka nsogbu ndị ahụ
Nwere ike itinye taya gravel na igwe kwụ otu ebe?
kedu ebe ana eme wheel zipp
Ebee ka a na-eme wiilị zipp - olee otu ị ga-esi dozie
Ndị Zipp bụ ndị kachasị mma? O doro anya na Zipp 404 bụ kpakpando nke ika ahụ ma nwee nnukwu ekele maka gburugburu niile. Ọ na-anọchi anya nnukwu nguzozi dị n'etiti ikuku, ịdị arọ zuru oke, yana ịdị mma dị mma. N'ihe banyere ndị egwuregwu atọ na ndị ọgba tum tum siri ike, Zipp 404 bụ ihe a na-ahụkarị bụ ọla edo. 19.02.2020
zipp aero ụkwụ
Zipp aero wheel - edepụtara ajụjụ na azịza
Ngwongwo Zipp ọ bara uru? The Zipp 404 bụ, na-enweghị ajụjụ, a kpochapụwo aerodynamic wheelset na otu nke n'elu nhọrọ mgbe ị na-achọ aerodynamic uru. Ọ bụrụgodi na ọ dabara na ọnụahịa ọnụ ahịa, ogo ya na atụmatụ ya bara uru ma ọ bụrụ na ị jighị obi ike kwalite nkwalite ikuku.
okporo ụzọ mmiri ozuzo igwe kwụ otu ebe
Ọ dị mma ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ na mmiri ozuzo? Nya mmiri ozuzo dị ize ndụ karịa ịnya na ọnọdụ akọrọ maka ihe doro anya: na-amị amị mgbe mmiri dị. Okporo ụzọ n'onwe ya. Ihe a na-ese agba na ihe mgbochi okporo ụzọ dị ka ice. Ọ na - ewe ogologo oge iji kwụsị ma ọ dị mfe ịpụ apụ, yabụ ịkwesịrị ịmebie ihe na mbụ, ọkachasị na mmiri mmiri.01.09.2020
gluing taya tubular
Gluing tubular taya - nzaghachi okwu
Needkwesiri ịkwanye taya tubular? N'ozuzu, e kwesịrị inwe nrapado zuru ezu iji jikọta taya na rim ma ọ bụghị oke gluu. Ike nkekọ tubular sitere na mpụta nke rim karịa etiti. Ọ bụrụ na taya ahụ pere mpe maka rim ahụ, ọ gaghị enwe ezigbo kọntaktị na mpụta mpụga.
kacha mma ụzọ igwe kwụ otu ebe
Ngwongwo igwe eletriki kacha mma - azịza ohuru
Gịnị bụ ihe kasị mma ụzọ bike taya? Ngwongwo igwe eletriki kacha mma maka ihu igweVittoria Corsa G2. 0 TLR. Pirelli PZero Velo ụzọ taya. Ugbo ala kacha mma kachasi elu maka ike. Schwalbe Pro Otu. Nke kacha mma taya na-enweghị eriri igwe maka ọtụtụ nha. Continental GP 5000. Ọpụrụiche Turbo Cotton. Chama Aka J.Randall XP. Goodyear Ugo F1 Tubeless Emechara. Pụrụ iche Roubaix Pro tyre. 6. 2021.